UBartlett uphoxekile ngezibhelu, ubethi iChiefs izosijabulisa kodwa dololo
UShaun Bartlett, oyiphini lomqeqeshi kwiTS Galaxy, uthi kubuhlungu futhi kushayisa namahloni okwenzeke eNingizimu Afrika emasontweni edlule kodwa kusengalungiseka.
Ukhuluma kanjena nje uBartlett iNingizimu Afrika beyithunya, kuntshontshwa ezitolo kushiswa namaloli ikakhulukazi KwaZulu-Natal naseGauteng. Lokho kuholele komkhulu umonakalo kanti kukhona nabashonile, futhi isibalo sabo silokhu sinyuka zonke izinsuku.
“Kuhlale kubuhlungu ukubona izwe lethu lisesimeni ebelikusona kulezi zinsuku eziyishumi ezedlule. UNelson Mandela wayehlale ethi ezemidlalo zinamandla okuhlanganisa abantu. Isikhathi esiningi abantu bezemidlalo bayaziqhelelanisa nepolitiki,” kusho uBartlett owake wadlalela iKaizer Chiefs neBafana Bafana.
“Nokho ngicabanga ukuthi njengabantu bezemidlalo singenza lukhulu kuleli lizwe. Lokhu kumele sikusebenzise ngendlela yokuthi kusizakale umphakathi wonke, senze isiqiniseko sokuthi siyawenza umehluko.
“Kumele sisukume sizithembise ukuthi ngeke siphinde sivumele into efana nalena eyenzeke ngeledlule ukuthi iphinde yenzeke ezweni lethu. Leli yizwe lethu kumele senze isiqiniseko sokuthi siyalinakekela.
“Kufanele sakhe okuthile okuncikene nekusasa lethu nokuzosala nezingane zethu. Benginethemba lokuthi iKaizer Chiefs izoletha ukumamatheka ezweni kodwa njengoba kuza ama-Olympic nginethemba lokuthi kukhona okuhle okuzosijabulisa.”
UBartlett uphinde wagcizelela ukuthi kubaluleke kakhulu abantu baseNingizimu Afrika bahlale beqhakambisa usuku okwazalwa ngalo owayenguMengameli wakuleli wokuqala wentando yabantu, uNelson Mandela, njengoba bekugujwa lona ngeSonto. Abantu abaningi bahlale besiza ngezindlela ezihlukene ngalolu suku.
FUNDA NALA: Isikhulu seMaritzburg sicacisa ngokudayiswa kukaKutumela
“Njengoba sengike ngaba nethuba lokuhlangana nendoda enkulu , uNelson Mandela, hhayi kanye kodwa izikhawu eziningi kakhulu, kwakuhlale kuyinto enhle futhi ekwenza uzizwe ubalulekile.
“Kithina njalo ngonyaka kubalulekile ukuthi sibe nale mizuzu engu-67 ukusiza lapho singasiza khona. Empeleni lokhu kumele ngabe sikwenza zonke izinsuku hhayi kuphela ngoJulayi 18. Leli zwe lidinga ukuvuselelwa ngezindlela eziningi,” kusho uBartlett.
Previous Previous post: UJettoo weMaritzburg ucacisa ngesizathu sokudedela izibabuli zabo
Next Next post: UMaluleka usejahe kuqale isizini, iSundowns ihubhe izicoco